Maung Yit | MoeMaKa Burmese News & Media
ကာတွန်း မောင်ရစ် – အစုိုးရအသစ်ဆိုတာရဲ့ စာမျက်နှာဟောင်းများ ဇန်န၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၄ No tags for this post. Related posts No related posts.
အွန်လိုင်းမီဒီယာကနေ ပုံနှိပ်မီဒီယာအဖြစ် မြင်ရတော့မယ့် မိုးမခ ခင်လေးမြင့်၊ အလင်းတန်းဂျာနယ်၊ ဒီဇင်ဘာ ဒုတိယပတ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၃ ပြည်ပရောက် မြန်မာများ၊ တိုင်းရင်းသားများ စာရေးစရာနေရာတနေရာအဖြစ် မိုးမခအွန်လိုင်းမီဒီယာက တည်ရှိနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးမခအွန်လိုင်းမီဒီယာမှာ...
အယ်ဒီတာ့လက်ရေး – ၃၀ ‘လမ်းခုလတ် ၂၀၁၃’ မောင်ရစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၃၊ ၂၀၁၃ ‘ခရီးမတ်တပ် လမ်းခုလတ်တွင် ကိုယ်လွတ် ရှောင်ခွာ ခွဲရပါ၍ အားနာခဲ့ကြောင်း ပြောပါလေ (မင်းသုဝဏ်၏ ကဗျာမှ)’ ၂၀၁၃...
ကာတွန်းမောင်ရစ် – သမ္မတကြီး လူသား“ဆန်”လိုက်တာ ဆိုပြီး မြှောက်ကြည့်ခြင်း
ကာတွန်းမောင်ရစ် – သမ္မတကြီး လူသား“ဆန်”လိုက်တာ ဆိုပြီး မြှောက်ကြည့်ခြင်း ဒီဇင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်းမောင်ရစ် – အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးပါတီ
ကာတွန်းမောင်ရစ် – အမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးပါတီ နိုဝင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်းမောင်ရစ်၏ မုဒိတာကာတွန်း နိုဝင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်းမောင်ရစ် – အားနာတဲ့ ကာတွန်း နိုဝင်ဘာ ၂၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်းမောင်ရစ် – လူပျောက်ကြော်ညာ
ကာတွန်းမောင်ရစ် – လူပျောက်ကြော်ညာ အောက်တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်းမောင်ရစ် – ဗမာပြည်သည် သင့်ကို အလိုမရှိ အောက်တိုဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်းမောင်ရစ် – တိရစ္ဆန်များကို မစပါနှင့် အောက်တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်းမောင်ရစ် – ဒီတခါတော့ အမေရိကန်နဲ့ ဗမာပြည် တူသွားဘီ၊ ၂ နိုင်ငံစလုံးမှာ အစုိုးရ မရှိဘူး … အောက်တိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related...
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ၂၀၁၅ အမတ်များ စကား
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ၂၀၁၅ အမတ်များ စကား အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
YIT – Questions for our Asean President
ကာတွန်းမောင်ရစ် – မေးခွန်းများနဲ့ အာဆီယံသမ္မတကြီး အောက်တိုဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်းမောင်ရစ် – အဖိုးမဖြတ်နိုင်သူတွေရဲ့ ပြေ … အောက်တိုဘာ ၈၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
Maung Yit – Elders Day, talk with Maung Swan Yi
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သက်ကြီးများနေ့၊ မောင်စွမ်းရည်နဲ့ စကားစမြီ မောင်ရစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၊ ၂၀၁၃ တကယ်တန်းကတော့ ဒီနေ့က စက်တင်ဘာ ၃၀ ပါ။ အမေရိကားမှာ နက်ဖြန်မှ လူကြီးများနေ့ ဖြစ်မှာ။ မိုးမခရဲ့ လူကြီးတွေထဲမှာ...
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ၂၅ နှစ် မွေးနေ့ ကာတွန်း စက်တင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၃ No tags for this post. Related posts No related posts.
အယ်ဒီတာ့လက်ရေး (၂၈) ကြာတော့သည်လည်း ‘ဒီ’စကား မောင်ရစ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၃ ဗမာပြည်နဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ နေထိုင်ရသူအတွက်က တခုမှ အကောင်းကြားရတယ် မရှိဘူး။ မိုးတွေ ရွာနေတယ်။ ရေတွေ လျှံနေတယ်။ လူတွေ...
အယ်ဒီတာ့လက်ရေး (၂၇) မိတ်ဆွေတွေကို ရန်သူဖြစ်အောင် မလုပ်ကြဖို့ … မောင်ရစ်၊ သြဂုတ် ၂၈၊ ၂၀၁၃ ဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာ သြဂုတ်လမှ ကွယ်လွန်တယ်။ သူ့မှာတမ်းထဲက တခုကတော့ “ရန်သူကို မိတ်ဆွေဖြစ်အောင် လုပ်ကြဖို့” ဖြစ်ပါတယ်။...